Tallaalka looga hortagaayo feyruska korona | Vantaa
Tallaalka looga hortagaayo feyruska korona
Waxaan boggaan ku soo uruurinay macluumaadka la xiriira tallaalka ee ku qoran luqaddaada hooyo.
Caabuqa ama infekshanka murqaha wadnaha
Dhammaan ilmaha buuxiyay dad’da 12 sano, waxaa ay ku imaan karaan wakhtiga ballan qabsashada ama si toos ah ayay u imaan karaaan goobta tallaalka ee tooska loo imaanaayo (walk in).
Dhammaan ilmaha da’doodu u dhexeyso 5-11 sano jir, waxaa ay ku imaan karaan oo kaliya in ay qabsadaan wakhtiga ballan qabsashada.
Dadka buuxiyay da’da 60-ka sano iyo kuwa xaaladdooda caafimaad awgeed ku jira kooxda u nugul halista cudurrada. Waxaa la siinayaa marka 3 bilood ka soo wareegto tallaalka 2.aad wakhtiga ballan qabsashada ama goobaha sida toos ah loo tago ee aan u baahnayn ballan qabsashada ee loo yaqaan (Walk in).
18-59-sano jir: 4 bilood laga soo bilaabo tallaalka 2.aad.
Qofka dhallinyarada ah wuxuu cudurka korona ku yahay mid fudud, laakiin xitaa dhallinyarada caafimaadka qabta waxaa ka soo ifbixi kara cudur aad u daran oo u baahan daryeel caafimaad. Waxaa jira xanuunno gaar ah oo kordhin kara khatarta ah, in ilmaha ama qofka dhallinyarada ah uu ku dhaco cudurka feyruska korona ee aadka u daran.
- shahaadada ku saabsan in cudurka korona uu qofka ku dhacay.